नेपाली सिनेमाका यि ‘भिलेन’:जस्लाई भेट्दा केटीहरु सुइकुच्चा ठोक्छन ! – YesKathmandu.com
नेपाली सिनेमाका यि ‘भिलेन’:जस्लाई भेट्दा केटीहरु सुइकुच्चा ठोक्छन !
हिरो/हिरोइनको धेरै फ्यान भेटिएको छ । तर चलचित्रलाई सुन्दर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भिलेनको फ्यान कतै भेट्नुभएको छ ? छैन,बरु तिनै भिलेन देख्दा बाटो घाटोमा केटीहरु गुण्डा आयो भन्दै सुईकुच्चा ठोक्छन । यस्ता भिलेन मध्य सुनिल थापा, सुशील पोखरेल, दिनेश शर्मा,रोबिन तमाङ,राजेन्द्र खड्की,यूवराज लामाको नाम चर्चामा छ । यस्तै भिलेन मध्य आज हामी केहीको चर्चा गर्दैछौं ।
नेपाली सिने जगतमा राते काँइलाका उपनामले चिनिने सुनीलको खास थर चाहिँ गुरुङ हो । एक समयको हिट चलचित्र चिनोबाट राते काँइलाले भिलेनका रुपमा चिनिएका हुन ।उनको गुण्डागिरी यति बलियो भयो की उनी सुटिङ गर्न गाउ जाँदा गाउका युवतीहरु डराएर भागेका धेरै घट्नाहरु सुन्न पाइन्छ । नेपाली सिने क्षेत्रमा उनलाई नम्बर वान भिलेन मानिन्छ ।
सुुशील पोखरेल सफल खलनायकको रुपमा परिचित छन् । दर्जनौं फिल्ममा खलपात्रको भूमिका निभाएर सुशील रंगमन्चबाट उदाएका कलाकार हुन ।
सुरुमा हिरो भएर काम गरेका दिनेश शर्मा पछि भिलेन बने । नेपाली बाबु, क्रोध , दाग, आर्शिवाद लगातका फिल्ममा भिलेन बनेर काम गरेका छन् ।
खसमा रोबीन तमाङ गायक हुन् । उनले छड्के बाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए । पहिलो फिल्ममै आफ्नो अभिनयलाई दर्शकले रुचाएपछि उनलाई भिलेनकै रुपमा छड्के, मुखौटा, वान वे, जय पर्शुराममा भिलेनको रुपमा काम गरेका छन् ।
सयौँ नेपाली फिल्ममा द्धन्द निर्देशकको रुपमा काम गरेका राजेन्द्र खड्गीले धेरैलाई एक्सन हिरो बनाए पनि आफू भने भिलेन बने । पर्दामा रुखो र डर लाग्दो राजेन्द्रले प्रेम विवाह गरेका हुन । उनका छोरीहरु पनि नेपाली सिने उद्योगमा सक्रिय छन् । राजेन्द्र खड्गी वास्तविक जीवनमै त्वोगान्दो, कराते जस्ता खेलका खेलाडी हुन भने उनले गृह जिल्ला मकावानपुरमा मुक्का प्रहार गरेर राँगा ढालेको प्रसंग कुनै वेला निकै चर्चित थियो । यसबाहेक विर्सनै नमिल्ने भिलेनमा युवराज लामा पनि हुन् ।
नेपाली सेना उत्कृष्ट, व्यावसायिक र मर्यादित सङ्गठनका रुपमा स्थापित-प्रम
संविधान कार्यान्वयनमा पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण–सञ्चारमन्त्री
टुकीबाट आगो लाग्दा ७ सय पुरानो गुम्बा ध्वस्त
सेयर बजार सत्र अङ्कले उक्लियो
भूकम्पमा परी १६ कैदीको मृत्यु
विधानबारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
उपप्रधानमन्त्री थापाले ट्वीट गर्दै भने–भारत जाँदैछु
मलाई भारतको पहिलेदेखि नै सहयोग थियो, मोदीजीसँग दिल खोलेर कुरा गरेँः प्रधानमन्त्री
मालदार चार मन्त्रालयमा अड्कियो कांग्रेस माओवादी हलो
इलेक्ट्रिकल ओभरसियर छैटौँ सेमेस्टरका विद्यार्थीले रोबोट बनाए
मन्त्रीको कुरा सुन्न नचाहेपछि स्थानीयले उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई नै कुटे